Imere akpaaka-ahia | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Naa: Ịchọ mma nke akpaaka moto-moto
Ntaramahụhụ maka ịdenye ụgbọ ala maka ụbọchị 10.
Ntaramahụhụ maka ịdenye ụgbọ ala maka ụbọchị 10. Anya CoAp. . Nkeji edemede 12.1. Ịkwọ ụgbọala nke anaghị edebanye aha na ya, ụgbọ na-adịghị agafe ọrụ na steeti ...
Ego ole ka ọ na-eri iji nye mkpụrụ ndụ. ike nke ọkàiwu maka ụgbọ ala ahụ? Ma onye na-azụ ahịa ahụ ọ ga-ewepu ya na ndekọ ahụ?
Ego ole ka ọ na-eri iji nye mkpụrụ ndụ. ike nke ọkàiwu maka ụgbọ ala ahụ? Ma onye na-azụ ahịa ahụ ọ ga-ewepu ya na ndekọ ahụ? Nyochaa n'ime otu puku, ma ọ bụrụ na ị tụkwasịrị obi, ọ nwere ike ime ya na ihe niile ...
kedu esi agafe ụgbọ ala ahụ?
otu esi enyefe ugboala ka iji scrap? "Nkwụsị nke ndebanye aha ụgbọ." A ga-eme ihe a n'ọnọdụ ikpe mgbe ụgbọ ala ahụ adịghị, n'aka ndị nwe ya, ma ewezuga ya ma ọ bụ…
M ga-akpọtụrụ ịzụta ụgbọala ma ọ bụrụ na PTC bụ oyiri? Ihe ọ bụla ọzọ suut. Kedu otu esi lelee ihe kpatara ya?
M ga-akpọtụrụ ịzụta ụgbọala ma ọ bụrụ na PTC bụ oyiri? Ihe ọ bụla ọzọ suut. Kedu otu esi lelee ihe kpatara ya? Na na oge anyị, a na-akpọ PTS ka ọ bụrụ ihe a na-adịghị ahụkebe, t ...
Kedu ka o si azụ ugbu a ma na-ere b. y. ụgbọ ala ahụ?
Kedu ka o si azụ ugbu a ma na-ere b. y. ụgbọ ala ahụ? Site na akaụntụ ugbu a, ụgbọ ala anaghị ewepụ (mgbanwe nke iwu nke ndebanye aha) na mpaghara enweghị nsogbu, ntụgharị ị nwere ike ịzụta ụgbọ ala na Moscow na ...
Mama m chọrọ idebanye aha nwa ya nwoke aha ụgbọ ala ahụ. Etu ị ga - esi mee ka ọ baa uru karịa maka otu abụọ na - enye, ịzụ na ire. ma obu ihe ozo ???
Nne ahu choro igbanwe ugbo ala maka nwa ya. Esi mee ka ọ bụrụ ihe bara uru nye ndị ọzọ abụọ iji nye onyinye, ịzụta na ire. ma ọ bụ ihe ọzọ ?? ego ka mma. ma ọ bụ ntụkwasị obi N'oge ndị na-adịbeghị anya, ajụjụ ahụ na-agbakarị ...
ole mmadụ ugbu a na Moscow bụ nọmba 555, 777 ma ọ bụ ihe ọ bụla?
ole mmadụ ugbu a na Moscow bụ nọmba 555, 777 ma ọ bụ ihe ọ bụla? banye n'ime MREO ọ bụla a ga - agwa gị ihe niile. Cool LLC, RAA, OMM, OOM, na ndị ọzọ maka dudes. ...
kedu akwụkwọ dị mkpa ịzụta ụgbọ ala eji?
Kedu akwụkwọ dị mkpa iji zụta ụgbọ ala eji? paspọtụ gị bụ ezigbo ajụjụ, ị ga - ajụ ajụjụ mgbe ọ bụla - ị nwere paspọtụ nke gị mgbe niile - ị nwere mmasị n'ụgbọ ala, gị na ndị uwe ojii na - ahụkarị ụzọ ọhaneze na - ezukọ na…
Ọ nwere ike ịkwụsị ịzụ ụgbọ ala na nkwekọrịta ire ere?
Ọ nwere ike ịkwụsị ịzụ ụgbọ ala na nkwekọrịta ire ere? O yikarịrị ka ọ bụghị, ị bụghị ụgbọ ala ọhụrụ, ọ dị mkpa iche, na SRT maka nyocha ahụ iji kpọọ, ma ọ bụrụ na ị ghọtaghị na ụgbọ ala ...
Enwere ike idozi ụgbọ ala maka nwatakịrị?
Enwere m ike ịnweta ụgbọ ala maka obere? mgbe ọ ga-adị mkpa ire Bush, nkwenye nke ngalaba nlekọta ga-adị mkpa, ebe ọ bụ na ị “napụrụ” ya ihe onwunwe ya site na 14 afọ ị nwere ike. Mba, ị nwere ike…
Kedu ihe dị mkpa iji dee ụgbọ ala maka nkwụsị?
Kedu ihe dị mkpa iji dee ụgbọ ala maka nkwụsị? Ị wepụ nọmba ahụ, soro gị, PTA, akwụkwọ ndebanye aha na paspọtụ gị na ihe niile, edepụtara ya maka n'efu ma enyeghị ndị uweojii na ...
Gịnị mere achọrọ m akwụkwọ mgbe m na-ere ụgbọ ala? olee mgbe ọ na-eme ya? Ana m ere ụgbọ ala
Gịnị mere achọrọ m akwụkwọ mgbe m na-ere ụgbọ ala? olee mgbe ọ na-eme ya? Ana m ere enyemaka igwe-ọnụ ọ dịghị onye chọrọ! Ọ bụ iji banye DCP (ịzụta nkwekọrịta ire), ụdị ha ...
Kedu ka m ga - esi edeba ọgba tum tum na - enweghị akwụkwọ?
Etu ị ga-esi debanye aha ndị ọgba tum tum na-enweghị akwụkwọ? ee, nsogbu adighi ... ị bịara wee kwuo… Achọrọ m ịsaa aka na ntinye aka maka akaụntụ na-enweghị ihe ọ bụla…. Mgbe ahụ enwere ike ịkpọga gị n'ụlọ nke iru uju (ọ bụghị ...
omenala omenala omenala
omenala omenala. Sun na-ekpebi iwu na omenala, na ikike engine ruo 1000 cu. cm ruo 3-x afọ Na-efu ruo 8.500 euro 54% nke ...
gịnị mere kandụl kpụ ọkụ n'ọnụ?
gịnị mere kandụl kpụ ọkụ n'ọnụ? N'ihi na mmanụ ụgbọala dị njọ ma ọ bụ kandụl ntụpọ Soot deposits. Nchịkọta nke soot na-egosiputa ngwakọta mmanụ na-ekpo ọkụ ma ọ bụ nkwụsị. Na-akpatara ndị mmadụ nsogbu, ike na-amalite ma na-ejighị n'aka ...
abawanye mmanụ ọkụ vases 2114!
mmụba mmanụ ọkụ nke VAZ 2114! Ma ọ bụ ikekwe ihe ntopute ihe ọkụ! Ihe ọ bụla nwere ike ịbụ! N'ihi nke a, ọ na-emeghe mgbe niile!))) Lee anya na tank - enwere ebe mgbapụ ọ bụla? Lee anya na pipeline nke mmanụ ahụ! ...
Kedu ihe ọ pụtara: "ire ụgbọ ala dịka mpempe data dị okpukpu abụọ ma debanyeghị aha ya"?
Kedu ihe ọ pụtara: "ire ụgbọ ala dịka mpempe data dị okpukpu abụọ ma debanyeghị aha ya"? nke a enweghị ike ịbụ. hazie ajụjụ a n'ụzọ ziri ezi So zụrụ ụgbọ ala dịka i kwuru.
ego ole ka ị ga-edozi ụgbọ ala ahụ?
Ego ole ka ọ na-eri iji mee ka ụgbọ ala ọhụrụ? Di nma, odighi uzo 500 rub ... Ọnụ ego ahụ bụ ihe dị ka 100 rub. + ndebanye aha - ihe dị ka 2500, + mkpuchi, kwuo 4000, gbakwunyere NA ...
Kedu ndepụta nke akwụkwọ dị mkpa iji weghachite ụgbọ ala maka onye ọzọ?
Kedu ndepụta nke akwụkwọ dị mkpa iji weghachite ụgbọ ala maka onye ọzọ? Ihe edere na ụgbọ ala (PTA na akwụkwọ ndebanye aha), nkwekọrịta nke ire ere, ngwa na MREO na de-ndebanye aha, onwe onye ...
Kedu ka ị ga - esi ghọta na m zụtara ụgbọ ala maka ịgbazinye ụlọ!
Kedu ka ị ga-esi ghọta ịzụta ụgbọ ala na mgbazinye! Okwu mgbazinye bụ okwu sitere na ngwaa a s l “lick”. Aghọtala ihe ịzụta ụgbọ ala na mgbazinye? Azụtara m ụgbọ ala na mgbazinye, nke pụtara na ka ị…